Kitapo fanny China ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy Unisex Kitapo kitapo misy fonosana mainty ho an'ny fanamboarana ivelany sy fanaovana fanatanjahan-tena sy ozinina | New Hunter
Fanny Packs ho an'ny vehivavy & lehilahy Unisex Pantsona kitapo misy fonosana mainty ho an'ny ety ivelany sy gym
Kaody momba ny vokatra: HT54012
Size: 16.5 * 6 * 4.3Inch (42 * 15 * 11cm)
Loko: Toy ny sary & Namboarina & araho ny lamba azo alaina warehuose
Vidin'ny FOB: USD4-USD7
* Ny fitaovana lehibe indrindra dia nylon misy fitrandrahana rivotra tsara. Malemy ilay lamba. Ny zipper dia porofon'ny harafesina ary mifatotra ary milamina. Mety amin'ny haben'ny valahana - Ny fehin-kibo dia manana fehikibo azo ovaina mifanaraka amin'ny andilana avy amin'ny 60cm-110cm (23,6 ″ - 43,3 ″), izay mahatonga ny fehin-kibo ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny tanora. afaka mitazona ny Iphone 7/8 / X Plus.
* Ny haben'ny kitapom-batsy dia momba ny: 16.5in x 6in x 4.3in, endrika dumplings, misy efitrano roa misaraka amin'ny zipera, ny endriny tsirairay dia afaka manampy anao hizara sy hitahiry entana manokana, ary ny famolavolana zipper tsotra sy mora dia afaka manampy anao hahita entana haingana sy mivantana.
* Ny fahafaha-manao anatiny dia lehibe mitazona zavatra toy ny kitapom-bolan'ny telefaona, manome vola ny harena sns. Mahazo aina sy mora entina, tsy ho voaolana sy mivadika noho ny fitehirizana azy.
* Ny kalitaon'ny fonosana fanny dia tsara, mafy ny fehin-kibo, ny fehikibo dia azo ovaina, ny endrika tsy mitombina sy antonona dia tsy hahatonga ny vatanao hahatsiaro ho teritery sy tsy mahazo aina, mafy ny fehikibo, noho izany eo am-panaovana hazakazaka, fikolokoloana sns. tsy mila miahiahy momba ny vatan'ny fehikibo hitondra ny enta-mavesatra sy ny olana, dia mety ho an'ny sokajin-taona rehetra amin'ny mpianakavy.
* Ny jack headphone dia natao hanamora ny fihainoana mozika sy hampiasana ny fiantsoana mandritra ny fanatanjahan-tena sy ny fitaizam-batana, amin'izay hahafahanao manafaka ny tananao mankafy ny fotoana fanatanjahanao manokana. Fomba maro hitafy ity fonosana andilana ity - Azonao atao ny manoloana izany eo alohan'ny valahanao, miverina amin'ny valahanao, mitanatana eny amin'ny tratranao na eo amboninao.
* Gurantee fahafaham-po: antoka fiantohana fahafaham-po 100% sy serivisy ho an'ny mpanjifa namana: Aza manahy momba ny serivisy. Raha manana olana amin'ny zavatra ianao dia aza misalasala mifandray aminay. (Amin'ny alàlan'ny baiko dia afaka mahita ianao: CONTACT SELLER) Ho any aminao izahay!
Teo aloha: Kitapo fivarotana mora azo ampiasaina indrindra - Kitapo miantsena tonga lafatra, Kitapo amoron-dranomasina, kitapo fitsangatsanganana
Manaraka: Kitapo kosmetika azo entina an-tsokosoko ho an'ny vehivavy mahafatifaty lamaody fandefasana kitapo multimunctional, kitapo fitsangantsanganana ho an'ny tovovavy
Kitapo miady amin'ny mpangalatra - Slim, maivana ...
Kitapo Sling Men Women Shoulder Backpack Small Cr ...